Ezigbo ụlọ | Shanghai Sunshine Teknụzụ Co., Ltd.
Thermopile Infrared okpomọkụ Sensor maka Smart Home Ngwa
Igwe ikuku nwere ọgụgụ isi na-eji infrared thermopile sensor dị iche na ọnọdụ ikuku ikuku. Enwere ike iji ihe mmetụta ahụ chọpụta ma ọ bụrụ na e nwere isi iyi ọkụ na mpaghara ntinye, ka ijikwa njikwa ụzọ ikuku na olu ikuku dị ka ọnọdụ ahụ si dị
Ngwa nke ihe mmetụta infrared thermopile na ngwa nju oyi, nwere ike nweta mmụba nke okpomọkụ, nwere njirimara nke nzaghachi ngwa ngwa, nwere ike inye ebe nchekwa kachasị mma maka nri na friji.
Onye na-esi nri na infrared thermopile sensor nwere ike ịlele ọnọdụ okpomọkụ n'ụzọ ziri ezi, nke nwere ike idozi nsogbu ahụ na ọkụ ọkụ ọkụ na-enweghị ike ịgbanwe ihe ọkụkụ ọkụ na-akpaghị aka dịka ọnọdụ edobere, ma enweghị ike nweta njikwa ọnọdụ okpomọkụ ziri ezi, nke na-ebute ike na ọkụ na ọkụ mfe kpatara nkụ ọkụ.
Igwe ihe onyonyo nwere ọgụgụ isi nwere ihe mmetụta infrared thermopile dị iche na oven microwave ọdịnala. O nwere ike idozi ngwa ndakwa nri site na ịlele nri nri na oge, ka ị wee nweta arụmọrụ dị elu na nchekwa nchekwa, ma hụ na nri dị ụtọ karịa.
Igwe eletriki nwere ọgụgụ isi nke nwere ihe mmetụta infrared thermopile dị iche na akwa eletrik eletrik. Ọ nwere ike tụọ kpọmkwem okpomọkụ nke ketulu na ozugbo, gbochie akọrọ ọkụ, na-azọpụta ume site ọgụgụ isi kpo oku.
Ventilator nke kichin
Igwe ihe kichin nwere ọgụgụ isi nke nwere ihe mmetụta infrared thermopile dị iche na ikuku kichin ọdịnala. Site na ịlele ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri ọkụ ahụ n'oge, a na-achịkwa fan iji melite ọnụọgụ nke mmanụ ọkụ ma chekwaa ike nke ọma.